လူကြီးမင်းလာရောက် ကုသစဉ် - Samitivej Hospital Bangkok Thailand - JCI Accredited World Class Hospital
Samitivej ၏ အနီးနားရှိ ဟိုတယ်တစ်ခုကို ရှာဖွေပါ
ထိုင်းနိုင်ငံကို ဆေးဝါးကုသဖို့ ရောက်လာကြတဲ့ နိုင်ငံတကာက ဧည့်သည်တွေမှာ သီးခြားလိုအပ်မှုတွေ ရှိကြတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ နားလည်ထားပြီး အဲ့ဒီလိုအပ်ချက်တွေ အားလုံးကို ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ ကျွန်တော်တို့ ရည်မှန်းထားရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဧည့်သည်အများစုကတော့ အဆင်ပြေချောမွေ့ပြီး သက်တောင့်သက်သာရှိတဲ့ ဆေးကုသမှုခံယူမယ့် Samitivej ဆေးရုံခွဲမှာပဲ နေထိုင်ဖို့ကို ရွေးချယ်လေ့ရှိကြပါတယ်။ သက်တောင့်သက်သာရှိလှတဲ့ Superior အခန်းတွေကနေ ကျယ်ဝန်းလှတဲ့ Presidential Suite တွေအထိ စုံလင်တဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နေရာထိုင်ခင်း ရွေးချယ်စရာများ အကြောင်းကို ပိုမိုသိရှိနိုင်ဖို့ လေ့လာကြည့်စေချင်ပါတယ်။
အကယ်၍ လူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့ ဆေးရုံကြီးရဲ့ အနီးအနားတ၀ိုက်မှာ တည်းခိုဖို့ကို ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုရင်တော့ အသုံးစရိတ် သတ်မှတ်ချက်နဲ့ အကြိုက် အားလုံးအတွက် သင့်လျော်တဲ့ ဟိုတယ်တွေနဲ့ ယာယီတည်းခိုအိမ်တွေဟာ အမျိုးမျိုးပဲ ရှိပါတယ်။ လူကြီးမင်းဟာ ဇိမ်ခံကြယ်ငါးပွင့် ဟိုတယ်တစ်ခုကို ရှာနေတာဖြစ်စေ၊ ဝန်ဆောင်မှုပါတဲ့ တိုက်ခန်းတစ်ခန်းကို ရှာနေတာပဲဖြစ်စေ ကျွန်တော်တို့ဆေးရုံတွေရဲ့ အနီးအနားမှာကိုပဲ ရွေးချယ်စရာတွေ စုံလင်စွာရှိနေပါတယ်။ အကယ်၍များ လူကြီးမင်းနဲ့ လူကြီးမင်းရဲ့ မိသားစုဟာ ဒီမြို့မှာ ရှိနေတဲ့အချိန်အတောအတွင်း ဆေးရုံပြင်ပ ဟိုတယ်တစ်ခုခုမှာပဲ တည်းခိုဖို့ကို ရွေးချယ်တယ်ဆိုရင်တော့ လူကြီးမင်းတို့ လာရောက်ဆေးကုသမှုမှာ ပိုမိုသက်တောင့်သက်သာ ရှိစေမယ့် ဟိုတယ်တစ်ခုကို ရှာဖွေနိုင်ဖို့အတွက် ဒီကဏ္ဍက ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။
ဒီကဏ္ဍမှာတော့ လူကြီးမင်းအနေနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ Bangkok မြို့အကြောင်းကို နည်းနည်းလောက် ပိုပြီးတော့ လေ့လာနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Bangkok မြို့ကြီးမှာ ကြွယ်ဝတဲ့ သမိုင်းကြောင်း၊ ထိပ်တန်း ဈေးဝယ်ထွက်စရာ၊ ကမ္ဘာ့အဆင့် စားသောက်ဆိုင်တွေနဲ့ အခြားသော အရာများစွာကို Samitivej ရဲ့ ဆေးရုံခွဲတွေ အနီးနားမှာတင် တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ အချို့သော ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လူနာတွေကတော့ Bangkok မြို့တော်ကြီးမှာ ပျော်ရွှင်ကြတဲ့အတွက် ပိုပြီးတော့ ကြာကြာနေချင်လေ့ရှိပါတယ်။ လူကြီးမင်းအနေနဲ့လည်း ဆေးဝါးကုသမှုအတွက်ဖြစ်ဖြစ်၊ အနားယူအပန်းဖြေဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ဗီဇာသက်တမ်းတိုးချင်စိတ်တွေ ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။
အချုပ်အားဖြင့် ဆိုရရင်တော့ ထိုင်းဘာသာစကား ဒါမှမဟုတ် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားမှလွဲပြီး အခြားဘာသာစကားပြောတဲ့ ဧည့်သည်တွေအတွက်လည်း ကျွန်တော်တို့ အကူအညီပေးနိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ ဘာသာစကားပေါင်း များစွာအတွက် စကားပြန် ဝန်ဆောင်မှုတွေကို ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ အခမဲ့ကူညီပံ့ပိုးပေးမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Tida Atikomtrirat, M.D.
Lt.Col. Sirakarn Tejavanija, M.D.